🥇 accounting yedesk rekubatsira
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 752
accounting yedesk rekubatsira
Vhidhiyo yeakaunzi yedesiki rekubatsira
Premium-kirasi chirongwa nemutengo unokwanisika
Economical Standard Professional
Enzanisa zvigadziriso zvepurogiramu
Muripo wenguva imwe chete:
Automation kubva kusangano redu ndeyekudyara kwakazara kune bhizinesi rako!
Isu tinoshandisa chete epamberi matekinoroji ekunze, uye mitengo yedu inowanikwa kune wese
Nzira dzekubhadhara dzinogona kuitika
International transfer Western Union kana chero imwe
Mabasa makuru epurogiramu yakasarudzwa Ona vhidhiyo
Mavhidhiyo ese anogona kutariswa nemadikidiki mumutauro wako
Multi-user operation mode kana uchitenga zvinopfuura rezinesi rimwe Ona vhidhiyo
Tsigiro yemitauro yakasiyana Ona vhidhiyo
Tsigiro yehardware: barcode scanners, risiti maprinta, label printers Ona vhidhiyo
Kushandisa nzira dzemazuvano dzekutumira: Email, SMS, Viber, izwi otomatiki kufona Ona vhidhiyo
Kugona kugadzirisa otomatiki kuzadza kwemagwaro muMicrosoft Word fomati Ona vhidhiyo
Kugona kugadzirisa toast zviziviso Ona vhidhiyo
Kusarudza chirongwa chekugadzira Ona vhidhiyo
Kugona kugadzirisa kupinza data mumatafura Ona vhidhiyo
Kukopa mutsara wezvino Ona vhidhiyo
Kusefa data mutafura Ona vhidhiyo
Tsigiro yekuronga maitiro emitsara Ona vhidhiyo
Kugovera mifananidzo kuti iwedzere kuratidzwa kweruzivo Ona vhidhiyo
Augmented reality kuti ionekwe zvakanyanya Ona vhidhiyo
Kuvanza kwenguva pfupi mamwe makoramu nemushandisi wega wega Ona vhidhiyo
Kuvanza zvachose makoramu kana matafura kune vese vashandisi vebasa chairo Ona vhidhiyo
Kuseta kodzero dzemabasa ekukwanisa kuwedzera, kugadzirisa uye kudzima ruzivo Ona vhidhiyo
Kusarudza minda yekutsvaga Ona vhidhiyo
Kugadzirisa mabasa akasiyana kuvapo kwemarepoti nezviito Ona vhidhiyo
Tumira kunze data kubva kumatafura kana mishumo kune akasiyana mafomati Ona vhidhiyo
Kugona kushandisa iyo Data Collection Terminal Ona vhidhiyo
Kugona kugadzirisa nyanzvi yekuchengetedza database yako Ona vhidhiyo
Ongororo yezviito zvemushandisi Ona vhidhiyo
Odha accounting yedesk rekubatsira
Mumakore achangopfuura, Batsira Dhipatimendi rekushandisa accounting rave richidzorwa nechirongwa chakakosha cheotomatiki, chinobvumira makambani eIT kushanda zvakanyanya nezvikumbiro nezvikumbiro, kupa rubatsiro, kuvandudza nekuvandudza masevhisi. Haasi ese mapurojekiti akatangwa kuti aite zveakaunzi chete, kusavhiringidzwa nezvimwe zvidiki, chinja wakasununguka pakati pemaitiro eDesk Rekubatsira, kuwana mhinduro chaiyo, uye kusaremedza vashandi nemabasa asina basa.
Advanced Help Desk tekinoroji kubva kuUSU Software system (usu.kz) vakadzidza zvakaringana kuti vanzwisise indasitiri, kuziva nezvezvinozvino maitiro uye mwero, uye kugadzira zvigadzirwa zvakakodzera izvo zvinonyatso shanda uye zvinogadzira mukuita. Haisi chakavanzika chinangwa chepuratifomu hachina kugumira kuaccounting inoshanda. Iyo zvakare ine basa renhau dzekutaurirana, inotarisisa zvinzvimbo zvehomwe yezvinhu, inoumba tafura yevashandi yechimiro, inogadzirira otomatiki mishumo uye chero mitemo. Marejista eDesk Rekubatsira ane ruzivo rwekutanga pane zvikumbiro nevatengi. Ruzivo rweaccounting rwuri nyore kuratidza pamasikirini, kuchinjana ruzivo nevamwe vashandisi, uye kutumira mishumo uye zvinyorwa. Hapana chikonzero chekushandisa mapurogiramu echitatu. Kana uchifunga nezve, pane chero matambudziko, vashandi havasangane nenguva yakatarwa, hapana zvinhu zvinodiwa kuti zvigadzirise kusashanda, ipapo vashandisi ndivo vachava vekutanga kuziva nezvazvo. Zvakakwana kumisa iyo yakavakirwa-mukati yekuzivisa module uye iwe unogona kuchengetedza maoko ako zvakachengeteka pane pulse yemanejimendi. Batsira Desk workflows inoratidzwa munguva chaiyo-nguva. Ruzivo rweAccounting runovandudzwa zvine simba. Nekuda kweizvozvo, vashandisi vanogona kuita kune zvikumbiro nekumhanya kwemheni, kugadzirisa, kudzidza yazvino mishumo yekuongorora uye kuita sarudzo dzekutonga. Nyaya dzemutengi dzekutaurirana dzakavharwawo zvakabudirira uchishandisa Rubatsiro Desk kumisikidza. Zviri nyore kuchinjanisa data accounting kuburikidza neSMS messaging module, taura zvazvino mhedzisiro yebasa, shuma, kupa mabasa, kushambadza masevhisi emasangano. Nekufamba kwenguva, zvigadziriso zveDesk Rekubatsira zvave kusarongeka. Ivo vanoshingairira kushandiswa nekutungamira makambani eIT kufambisa kuchengetedzwa kwemarekodhi ekushanda, kubvisa mukana diki wezvikanganiso uye zvisizvo, uye kuunza manejimendi matsva uye maturusi esangano. Automation inoita seyakanakisa mhinduro yekukwirisa maparamendi ezvivakwa basa, kusunungura vashandi kubva kubasa rezuva nezuva, uye kwete kutambisa imwe nguva pane zvakajairwa maitiro. Iyo purojekiti iri kusimukira zvine simba. Yakabhadharwa ma-add-ons aripo. Rondedzero inoenderana inotumirwa pawebhusaiti.
Iyo Yekubatsira Desk chikuva inotarisisa zvinzvimbo zvesevhisi uye rutsigiro rwehunyanzvi, ine basa rekupinda mameseji uye zvikumbiro, mazuva ekupedzisira, uye inovhara kutaurirana nevatengi. Kuchengeta marekodhi ekushanda kunova nyore kana madhairekitori anodiwa uye makatalogi ari pedyo. Zvinokwanisika kuchengetedza zvinyorwa zvedhijitari. Nguva yekunyoresa nyowani yekukwidza yakaderedzwa zvakanyanya. Maitiro ekushandisa akazara otomatiki. Iwe unogona kuvimba neakavakirwa-mukati kuronga kune zvese zvine chekuita nevashandi, nguva dzekusangana, uye zvirongwa zvehurongwa.
Kugadziriswa kweKubatsira Desk kwave kushandiswa nekusimbiswa kwekunyaradza kwekushandiswa kwemazuva ose. Panguva imwecheteyo, chirongwa hachiise mberi zvakakosha zvinodiwa maererano nedanho rekuverenga komputa, hunyanzvi, kana ruzivo.
Kana zvimwe zviwanikwa zvichidikanwa nekukurumidza kune mamwe mabasa, saka ruzivo rwe accounting rwunobva rwaratidzwa pazviratidziro. Vashandisi vachave vekutanga kuziva nezvazvo.
Basa rebasa rinosanganisira matanho akati wandei, rimwe nerimwe rinodzorwa nehungwaru hwekugadzira. Yakapa mukana wekuti urambe uchibatana nevatengi base kuburikidza nehuwandu hweSMS-kutumira. Kuburikidza nepuratifomu yeDesk Rekubatsira, zviri nyore kupfuura nakare kose kuchinjana ruzivo nezvezvikumbiro zvakagamuchirwa, kutumirana magwaro, mifananidzo, mishumo, uye rumwe ruzivo. Iyo maumbirwo ekuita metrics accounting data inoratidzwa nekuona, iyo inobatsira kukurumidza kuona madiki matambudziko uye kugadzirisa kunongedza. Kuzivisa vashandisi nezve zviitiko zvazvino zvesangano zvinopihwa kune inoenderana digital module.
Usaregeredza kugona kwekubatanidza nemasevhisi epamberi uye masevhisi. Rondedzero yacho inoburitswa pawebhusaiti. Makambani mazhinji eIT, mabhizinesi ega ega, nzvimbo dzebasa, uye masangano ehurumende anoshandira vanhu vakawana chirongwa ichi. Haasi ese maelementi akawana nzvimbo mune yekutanga kumisikidzwa. Dzimwe sarudzo dzinoratidzwa zvakasiyana. Tinokukurudzira kuti uzvizivise nemaitiro anoshanda. Tanga nebvunzo kuti uzive chigadzirwa zviri nani, tsvaga simba, uye kunyatsoyera zvakanakira nezvayakaipira. Nhasi, masangano mazhinji akatarisana nedambudziko rekukurumidzira, iro rinosanganisira kuderedzwa kwemitengo pamwe nekuvandudza nguva dzose kunaka kwezvinhu uye masevhisi anopihwa. Mumamiriro ezvinhu ehupfumi huripo uye kuwedzera kwekukwikwidzana pakati pemabhizinesi, chido chekudzikisa mari kana mari yekugadzira yakangove basa rakaoma. Mune mamwe mazwi, kukosha kwekugadzirisa maitiro kuri mukudiwa kwekuvandudza kugona kwemabhizinesi nemasangano, tichifunga nezve kuderera kwevaridzi vebhizinesi maererano nekugadzirisa mabhizinesi maitiro. Kubatsira Desk accounting kunouya kuzobatsira.
Rudzi rwekukwirira *Tenga chirongwa ichiKumbira mharidzoKubvunza mubvunzoBatsira nedemo-vhezheni ConfigurationEconomicalStandardProfessional
accounting yemabasa download
Chirongwa chekutumira maemail
Chirongwa chekufona accounting
kuverenga kweimba yekuchengetera zvinhu kwenguva pfupi
Zvirongwa zvekuchengetedza kero pane warehouse
Chirongwa chekutarisira kuvaka
Accounting yemari uye mari
Purogiramu yebhajheji yemhuri
Chirongwa chechikoro chemhando
Accounting yekutora chikamu mushoo
Chirongwa chekupaka mota
Accounting mukambani yekutakura
Automation yekutakura vanhu
Courier delivery program
Purogiramu yedhesiki rebasa
Helpdesk otomatiki software
app yekubatsira desk
otomatiki yedhesiki rekubatsira
Automation yekugadzirisa zvikumbiro kune technical support service
Tenga Service desk
Kudzora dhesiki rekubatsira
Mapurogiramu epadhesiki rekubatsira mahara
Yemahara system yekubatsira desk
Batsira desk download
Batsira dhesiki kuita
Mapurogiramu edhesiki rekubatsira
Batsira desk systems
Kutarisira dhesiki rekubatsira
Optimization yerutsigiro rwehunyanzvi
Zvirongwa zvekutsigirwa kwehunyanzvi
Chirongwa chebasa rekutsigira tekinoroji
Hunhu hwebasa rekutsigirwa kwehunyanzvi
Service desk otomatiki
Mari yedhesiki rebasa
Kuitwa kwesevhisi dhesiki
Sangano redhesiki rebasa
Software for technical support
Masisitimu ekunyoreswa kwezvikumbiro kune technical support
Sisitimu yezvikumbiro kune technical support
Sisitimu yekutsigirwa kwehunyanzvi
Sisitimu yekutsigirwa kwehunyanzvi hwevashandisi
Sisitimu yebasa rekutsigira tekinoroji
Unyanzvi tsigiro otomatiki
Unyanzvi hwekutsigira sevhisi otomatiki
Technical support service management
Tsigiro yehunyanzvi basa otomatiki